Functional Warshadda Lanyard - Shiinaha Wax -soo -saarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Waxqabadka Lanyard
Lanyards -ka looma isticmaalo kaliya dhacdooyinka si loogu muujiyo astaanta loo habeeyay, laakiin sidoo kale waxay noqdaan kuwo aad u shaqeynaya iyadoo la kaashanayo aaladaha iyo agabyada kala duwan. Tusaale ahaan, suunka gaaban ee leh carabiner ayaa loo adeegsadaa hawlaha bannaanka. Suunka taleefanku wuxuu kuu fududaynayaa wiishkaaga isagoo kaa hor istaagaya inaad ka tagto taleefanka gacanta meel kasta oo aad illowday. Cabitaan -cabuhu wuxuu xor u noqon karaa gacmahaaga marka aad gacan -qaaddo inta lagu jiro hawlaha. Liirarka indhaha ee isboortiga ayaa ka dhigaya muraayadda meel kasta oo aad tagto. Laydhka kamaradaha ayaa hayn doona kamaradaha aad jeceshahay. Iska daa laydhadhka LED-ka, waxay ka dhigtaa lanyar-yada kuwo soo jiidasho leh oo indhaha soo jiidan kara habeenkii. Waxaa intaa dheer, waxaa loo isticmaali karaa in kaararka dembiga iyo labiska xafladda. Laydhka ayaa noqon doona kuwo aad u shaqaynaya marka qalab dheeraad ah oo waxqabad leh soo baxo. Miyaad xiisaynaysay labada hawlba? Mise wax fikrad ah ma ka qabtaa hawsha gaarka ah ee xayndaabyada? U soo dirista astaanta annaguna waxaan ku siin doonnaa talooyinka xirfadeed sida baahidaada gaarka ah loo habeeyay. In kasta oo aan bixinayno qiimaha ugu fiican, haddana tayadayadu sidoo kale waa la ilaaliyaa. Sida 37 sano soo saaraha, sumadeena cag kasta iyo koritaankeenu waxay si dhow ugu xiran yihiin macaamiisheena.
Xarig Gaaban oo leh Carabiner -ka
Laydhka dhalada biyaha
Laamiyada leh dhalo fur
Laydhka muraayadaha indhaha
Laydhka LED -ka
Lanyards -ka Pacifier
Aiguillettes Uniform iyo Sash Ceremonial